Mahajanga : Nifoha tamin'ny torimasony ny Grand Sud-Est
lundi, 19 juin 2017 15:16
Nahazo filoha vaovao ny "Association des cadres Grandes Sud-Est Mahajanga". Heriniaina Léonard no voafidin'ireo mpikambana mivondrona ao amin'ny "Association des cadres Grand Sud-Est Mahajanga" ho filoha hitarika ny fikambanana indray, mandritra ny telo taona.
Tontosa ny sabotsy 17 jona lasa teo ny fifamindram-pahefana teo aminy sy ny filoha teo aloha Tsifakia Pascal.
Nifoha tamin' ny torimasony indray ny fikambanana rehefa nangina nandritra ny taona maro izay.
Fikambanana sosialy ny Association des cadres du Grand Sud-Est mamondrona ireo vato nasondrotry ny tany avy any amin'iny faritra iny ary miasa sy mipetraka aty Mahajanga. Faritra Anôsy, Vatovavy Fitovinany ary Atsimo Atsinanana no voafaritra sy tafiditra ao anatin'ny fikambanana.
Laharam-pahamehana amin'izao ny fanangonana indray izay vaokasika hiditra ho mpikambana, fanomezana tantsoroka ny fikambanana reniny dia ny Association des cadres Grand Sud-Est satria mahatsapa izy ireo fa kitro ifaharan'ny fampandrosoana ny faritra nipoiran'izy ireo ary anisan'ny singa lehibe mampiodina ny fikambananan'ny Grands Sud.
Isan'ireo hahazo tombony ihany koa amin'izao fivondronana izao ireo mpianatra avy any amin'ireo faritra ireo mandranto fianarana eto Mahajanga.
Nanamafy ny filoha vaovao hitarika miaraka amin'ireo birao voafidy fa tsy handraraka ilo mby an-doha fa hiezaka indray hanandratra ny faritra nihavian'izy ireo.
Propecia Online Canada No Prescription [url=http://leviprices.com]over seas orders for vardenafil[/url] How Much Amoxicillin Should I Take
lundi, 30 octobre 2017 14:25
Cialis Potenzmittel Rezeptfrei Cialis Every Day Pill Prices [url=http://leviinusa.com]best online levitra[/url] Amoxicillin In Animals Buying Cialis Propecia
dimanche, 08 octobre 2017 12:37
Generique Baclofen [url=http://mailordervia.com]buy viagra[/url] Dog Cephalexin Reaction
jeudi, 05 octobre 2017 16:18
Achat Ligne Xenical [url=http://cialtobuy.com ]cialis[/url] Cialis 20mg Bestellen
Immagini Kamagra online pharmacy Dapoxetine Offers
mercredi, 20 septembre 2017 22:34
mardi, 25 juillet 2017 23:46
[url=http://iti60.ru/component/k2/itemlist/user/30914]unsecured personal loans with bad credit[/url]
[url=http://blog.csanjuan.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=228439]cash loans greenville sc[/url]
[url=http://shipgiare.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=467060]1000 personal loan[/url]
[url=http://bioscomputer.net/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=13323]payday loans austin tx[/url]
[url=http://hdv-media.fr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6742]cash advance saginaw mi[/url]
[url=http://www.style-ultramarine.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=322665]cash net loans[/url]
dimanche, 25 juin 2017 20:44
mercredi, 21 juin 2017 11:17